फेरि लोड शेड्डिङ सुरु हुन थालिसक्यो
काठमाडौं – नेपाल एअरलाइन्सका वरिष्ठ पाइलट विजय लामाले नेपाल विद्युत प्राधिकरण देशमा बिस्तारै लोडसेडिङ गर्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्राधिकरणमाथि यस्तो आक्रोश पोखेका हुन । क्याप्टेन लामाले अहिले लोडसेडिङ सुरु नै भइसकेको भन्दै यो बिस्तारै बढ्दै जाने समेत बताए ।
'कारण देखाउँदा सुख्खा याम भएकोले पानीको सतह घटेर भन्छन् प्राधिकरणका हाकिम साबले उनले भने ‘के कुलमान घिसिङको पालामा चाँही सुख्खा याम लागेन ? अनि पानी टन टना टन हुन्थ्यो हो ? प्रकृति अनि भाग्यले मात्र साथ दिएको हो त कुलमानलाई ?
अबको केही समयमा इन्भर्टर अनि जेनेरेटर माफियाहरु सल्बलाउने उनले अनुमान गरेका छन् । यही अवस्था जारी रहे अब फेरि जनता र देशलाई पुरानै अवस्थामा पुर्याउन सक्ने लामाको भनाइ छ ।
लामा लेख्छन्, ‘अबको केही समयपछि फेरि इन्भर्टर अनि जेनेरेटर माफियाहरु सल्बलाएर आउदैंनन् अनि जनतालाइ पुरानै ठाउमा पुराउँदैनन् भन्न सकिन्न । यही चालाले पुर्याउनु समय लाग्दैन ।’
अहिले जनताले जे पनि चुपचाप सहने भइसकेको लामाको भनाइ छ । जे पनि चुप लागेर सहने भएकाले जनता भनेको के हो पनि बुझ्नै गाह्रो भैसकेको उनले बताए ।
लामा थप लेख्छन्, ‘हुन त के नै गर्न या बोल्न सकिन्छ, जुन देशमा शीर्ष नेताहरुलाई झगडा गर्नमा नै फुर्सद छैन । झैझगडा गर्न रोकेर देश विकासका काम कुरा पो गर्ने कि
उनको स्टाटस् जस्ताको तस्तै :फेरि लोड शेड्डिङ सुरु हुन थालिसक्यो। बिस्तारै समय अवधी बडाउदै जाँदै छ! कारण देखाउदा सुख्खा याम भएकोले पानीको सतह घटेर भन्ने गर्छ्न बिद्धुत प्राधिकरणको हाकिम साबले!!!
के कुलमान घिसिङको पालामा चाहिँ सुख्खा याम लागेन अनि पानी टन टना टन हुन्थ्यो हो? प्रकृति अनि भाग्यले मात्र साथ दिएको हो त कुलमानलाइ???
केही समय पछि फेरि इन्वर्टर अनि जेनेरेटर माफियाहरु सल्बलाएर आउदैनन अनि जनतालाइ पुरानै ठाउमा पुराउदैन भन्न सकिन्न!!! यहि चालाले पुर्याउनु समय लाग्दैन।
जनता भनेको के हो बुझ्नै गाह्रो भैसक्यो कारण जे पनि चुप लागेर सहने???
हुन त के नै गर्न या बोल्न सकिन्छ जुन देशमा शिर्श नेताहरुलाई झगडा गर्नमा नै फुर्सद छैन!! झै झगडा गर्न रोकेर देश बिकाशका काम कुरा पो गर्ने कि??